March 2019 - Ceelhuur Online
Faa Faahin: Dab qasaare gaystay oo ka kacay Guriceel
March 31, 2019 Cali Yare291
Waxaa weli uu dabka oo geystay khasaaro hantiyadeed uu ka socdaa goobo Ganacsi oo ku yaalla degmada guriceel ee gobolka Galgaduud, iyada oo dabka uu kusii fiday goobo Ganacsi oo kale. Dabka ayaa markii hore ka bilaawday kaalin Shidaal oo ay leedahay shirkad lagu Magacaabo Beder,isaga oo kusii fiday Goobo Ganacsi oo kale oo ay […]
Xildhibaano gudbiyey Mooshin deg deg ah
March 30, 2019 admin370
Xildhibaanno ka tirsan golaha shacabka ayaa maanta guddoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan u gudbiyey mooshin deg deg ah. Xildhibaanadan ayaa gudoomiyaha ka codsaday Mooshinkan lagu daro ajendaha Fadhiga 1aad ee kalfadhiga 5aad ee Golaha Shacabka. Mooshinkan ayaa ka hadlaya xaaladda ammaanka Dalka, waxaana saxiixay 17 xildhibaan.
Qaar ka mid ah Waddooyinka Muqdisho oo la xiray
March 30, 2019 admin285
Inta badan waddooyinka halbowlaha u ah isu socodka magaalada Muqdisho ayaa saaka oo Sabti ah xiran, iyadoo la dhigay Ciidamo ka tirsan Booliska, kuwaasoo wata gaadiidka dagaalka. Ciidamada ayaa xiray isgoysyada sida Tarabuunka, Zoobe, Banaadir, Dabka iyo kuwa kale oo isku xira jidadka Wadnaha iyo Maka Al-Mukarama, waxaana wadada bartankeeda lagu jaray gaadiidka dagaalka. Waddooyinka […]
Soomaaliya oo ka qeyb gashay shirka Arimaha Qaxootiga
March 28, 2019 admin256
Wafdi wasiirro oo ka socda Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Kambala ee caasimadda dalka Uganda, halkaassi oo ay uga qeyb galayaan shir looga hadlayo arrimaha qaxootiga, oo uu soo abaabulay Urur Goboleedka IGAD. Shirkan oo soconayay muddo saddex cisho ah ayaa waxaa ka soo qayb galay Wasiirro iyo agaasimayaal iyo hay’adaha kala duwan oo arrimaha qaxootiga […]
Sabriye oo Muqdisho ku laabtay isagoo gacmo maran
March 27, 2019 March 27, 2019 admin464
Wasiirka Arimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa saaka si deg deg ah ugu laabtay Magaalada Muqdisho, wasiirka oo shalay barqadii soo gaaray Dhuusamareeb ayaa kulamo isdaba joog ah la yeeshay Madaxda Galmudugta Dhuusamareeb iyo Hoggaamiyaha Ahlu Sunna Macalin Maxamuud. Kulamadii ugu dambeeyey ayaa dhacay xalay, waxaana wasiirku kulan la […]
March 27, 2019 Cali Yare278
Maanta oo Arbaco ah ayaa lagu wadaa in uu furmo kal-fadhiga 5-aad ee Golaha Shacabka ee Barlamaanka Federaalka Soomaaliya, akdib Xildhibaanada oo fasax ku jiray in ka badan laba bilood. Munaasabad lagu furayo kal-fadhiga 5-aad oo lagu qaban doono xarunta Jeneraal Kaahiye (Iskool Buluusiya) ayaa waxaa ka qeyb geli doona Madax ka socota baarlamaanada dowlad […]
Xerada Qaxootiga Dhadhaab oo la xirayo
March 27, 2019 Cali Yare209
Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday inay gebi ahaanba xireyso Xerada Qaxootiga Dhadhaab, halkaas oo ay ku sugan yihiin Kumanaan u badan Qaxooti Soomaali ah. Wakaalada wararka AFP ayaa baahisay inay heshay dukuminti ku saabsan xirista xeradan qaxootiga, isla markaana Kenya ay xeri doonto Bisha Agoosto ee Sanadkaan. Hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa […]
Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo howlgal lagu qabtay
March 27, 2019 Cali Yare348
Weerar qorshaysan oo Ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka fuliyeen Gobalka shabeellaha hoose ayaa la sheegay in lagu soo qabtay sarkaal sare oo ka mid ah dagaalamayaasha Ururka Al-Shabaab ee dagaalka kula jira dowladda Federaalka. Warbaahinta dowladda ayaa baahisay in howlgalka uu dhacay habeenimadii 26-kii Bishan March , isla markaana uu ka dhacay deegaanka jambaluul ka […]
Maxaa kasoo baxay kulamadii Dhuusamareeb?
March 26, 2019 March 26, 2019 admin8691 Comment on Maxaa kasoo baxay kulamadii Dhuusamareeb?
Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya Eng. Cabdi Maxamed Sabriye ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug, waxaana garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey Gudoomiyaha Dhuusamareeb, wasiiro, iyo qeybaha bulshada. Sabriye ayaa intaas kadib loo galbiyey Xarunta Gobolka oo uu kula kulmay Axmed Ducaale Xaaf, iyo Sheekh Maxamed Shaakir. sidoo kale wasiirka ayaa kulan gaar ah la qaatay Axmed […]
Wasiirka Cadaaladda DFS oo Furay Dood Wadaag Dhibaatooyinka Musuqmaasuqa
March 26, 2019 admin223
Kulankan dood wadaaga ah ee Dhibaatooyinka Musuq Maasuqa iyo sida loo hormarin karo howlaha dowladda oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ay ka qayb galayaan qaar ka mid ah Hay’adaha dowladda iyo bulshada rayidka ayaa waxaa furay wasiirka wasaaradda Cadaaladda Mudane Xasan Xuseen Xaaji waxaana uu socon doonaa 2 maalin […]